Ihe di iche - Geofumadas
Okwu dịgasị iche iche na geofumadas
Robotik nwere mgbagwoju anya
Site na CAD iji chịkwaa otu sọftụwia Fuzzy Logic Robotics na-ekwuwapụta ngosipụta nke ụdị izizi nke Fuzzy Studio ™ na Hannover Messe Industry 2021, nke ga-aka akara ntụgharị na ntụgharị mgbanwe robotic. Gdọrọ na idobe akụkụ CAD na gị 3D dijital ejima site ...
Engineering, innovations, ọtụtụ
Exceldị Excel - aghụghọ dị elu na CAD - GIS na Macros
AulaGEO na-eweta usoro ọhụụ a ebe ị ga-amụta iji nweta ọtụtụ Excel, tinye n'ọrụ aghụghọ na AutoCAD, Google Earth na Microstation. Ọ gụnyere: Ntughari nke nhazi site na mpaghara gaa na arụ ọrụ na UTM, Ntughari nke nhazi ntụpọ na ogo, nkeji na sekọnd, Ntugharị nke nhazi ọkwa dị larịị na ntinye na anya, Zipu si Excel na Google Earth, ...
Course Iji Filmora dezie vidiyo
Nke a bụ usoro bara uru, dịka ịnọdụ ala gị na enyi gị wee gwa gị otu esi eji Filmora. Onye nkuzi n’ezie gosipụtara otu esi eji mmemme ahụ, nhọrọ ndị nhọrọ dị na ya na-enye gị yana etu esi arụ ọrụ. Filmora bụ a ebube video nchịkọta akụkọ, mfe iji, kensinammuo na nnọọ ...
Usoro ihe osise
Usoro ArtGEO, ọtụtụ
Twingeo bidoro mbipụta nke anọ
Geospatial? Anyị ejiriwo nnukwu mpako na afọ ojuju bịa na mbipụta nke anọ nke Magazin Twingeo, ugbu a n'oge nsogbu ụwa nke, maka ụfọdụ, abụrụla ihe na-akpata mgbanwe na nsogbu. N'okwu anyị, anyị na-aga n'ihu na-amụta - na-enweghị ịkwụsị - uru niile nke igwe dijitalụ na-enye yana mkpa ...
GRAPHISOFT na-agbasa BIMcloud dị ka ọrụ maka nnweta ụwa
GRAPHISOFT, onye ndu ụwa n’ịrụpụta ihe ọmụma ngwanrọ maka iwulite ihe ọmụma (BIM) maka ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ, agbasawanye nnweta BIMcloud dị ka ọrụ zuru ụwa ọnụ iji nyere ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ na ndị nrụpụta aka rụkọtara oge taa na-arụ ọrụ site n’ụlọ N'oge ndị a siri ike, a na-enye ya n'efu maka ụbọchị 60 nye ndị ọrụ ARCHICAD site na ụlọ ahịa weebụ ọhụrụ ya. BIMcloud dị ka ...
BIM Udo GIS ỌGITYM SMAKA SMART
Akụrụngwa bụ ihe a na-ahụkarị taa. Anyị na-echekarị obodo ndị nwere ọgụgụ isi ma ọ bụ nke dijitalụ n'ihe gbasara nnukwu obodo nwere ọtụtụ ndị bi na ya na ọtụtụ ọrụ metụtara nnukwu obodo. Agbanyeghị, obere ebe dịkwa mkpa akụrụngwa. Ihe n'eziokwu na ọ bụghị ókèala ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile na-akwụsị na mpaghara mpaghara, ...
Geomatics na Earth Sciences na 2050
Ọ dị mfe ịkọ ihe ga-eme n'izu; A na-adọta ihe omume a, ogologo oge ka ihe omume ga-eme ma kagbuo ihe ọzọ a na-atụghị anya ya. Na-ebu amụma ihe nwere ike ime na otu ọnwa na ọbụlagodi otu afọ na-abụkarị atụmatụ na atụmatụ itinye ego na mmefu ego kwa ọnwa na-adịtụ obere, agbanyeghị na ọ dị mkpa ịhapụ ...
BIM cartography Geomatik GIS
Usoro ArcGIS 10 - site na ncha
Gmasị GIS, yabụ ebe a ị nwere ike ịmụ ArcGIS 10 site na ncha ma nweta asambodo. Usoro a bụ 100% nke onye okike nke "Franz's blog" kwadebere, ọ bụrụ na ị gara na ibe ahụ, ị ​​ga-ama na ọ bụrụ na ị ga-amụta, ọ bụrụ na ọ bụghị, mee ya tupu ịmalite. Gụnyere mmega na akwụkwọ: Isi nke GIS. Ee…
Nzọụkwụ QGIS 3 site na ncha
Usoro QGIS 3, anyị na-amalite na efu, anyị na-aga ogologo ruo mgbe anyị ruru ọkwa dị n'etiti, na njedebe na-enye akwụkwọ. Geographic Information Systems QGIS, bu uzo emebere n'uzo zuru oke. Ọ na-ejikọta akụkụ dị ntakịrị nke na-enye ụmụ akwụkwọ ohere ịdabere na ihe ọmụma ha na GIS, ...
ArCADia BIM - Nhọrọ iji weghachite
[isiokwu na-esote = "ArCADia 10"] Achọrọ m teknụzụ BIM taa? Okwu Buildinglọ Mwube Ihe Owuwu (BIM), dị ka akọwara na Wikipedia, bụ ịme ngosipụta nke ozi gbasara iwu na ụlọ. Ọ bụ ezie na okwu a aghọọla ihe a na-ahụkarị n'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị anaghị aghọtacha echiche a nke ọma n'ihi na ...
Ụlọ ahịa na-echekwa na ụlọ ahịa akpaaka
Yabụ ị bụ onye nwe Chrysler dị mpako? Kedu ụdị Chrysler bụ nke gị? Ọ bụ Voyager, 300, Neon, PT Cruiser, Vision, Viper, Sebring, Crossfire or Grand Caravan? Ugbo ala nile nke akara American nke Chrysler bu ihe puru iche ma nye ha ...
Obu akwukwo ohuru nke BIM: BIM n'asusu di mfe
Entlọ ọrụ Bentley Press Institute, onye mbipụta akwụkwọ ọgụgụ dị iche iche na ọrụ ndị ọkachamara na-arụ ọrụ nke raara nye ọganihu nke BIM metụtara n'akụkụ dị iche iche dịka ije, injinia, ihe owuwu, arụmọrụ, ọdịdị ala na agụmakwụkwọ, kwupụtara taa nnweta nke aha ohuru ya bu BIM na asusu ozo, odi ugbua ...